Fọl PRL-8-53 dị ala (51352-87-5) hplc ma98% | AASraw SARMS ntụ ntụ
/ ngwaahịa / SARMS / PRL-8-53 ntụ ntụ
Rating: SKU: 51352-87-5. Category: SARMS
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke PRL-8-53 (51352-87-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Mpempe akwụkwọ PRL-8-53 (Chemical aha methyl 3- (2- (benzyl (methyl) amino) ethyl) benzoate) bụ a sịntetik nootropic compound chọpụtara na 1972 na patented na 1975 site mbubreyo Dr. Nikolaus Hansl, a neuropharmacologist na Creighton University dị na Omaha, Nebraska.
Ụdị PRL-8-53 na-agba ume bụ ntụpọ bụ isi nke Characters
aha: Mpempe akwụkwọ PRL-8-53
Usoro Molecular: C18H22ClNO2
Molekụla arọ: 319.82578
Mpempe akwụkwọ PRL-8-53 dị ala na-eme ka ụbụrụ rụọ ọrụ na mmụba ọzọ
2. Ụdị PRL-8-53 dị ala Uzo:
Nanị nnyocha ụmụ mmadụ na-eme na ntụpọ PRL-8-53 dabeere na ingestion nke otu 5 mg dose. Enweghị ihe ọmụma banyere nrịanrịa ma ọ bụ nke pụrụ iji ọgwụgwọ ọ bụla ọzọ na ụmụ mmadụ.
Ịdọ aka ná ntị na PRL-8-53
Dị ka ihe àmà na oke, ntụpọ PRL-8-53 yiri ka ọ bụ agonist dopamine. Nke a pụtara na ọ nwere ike imezi ndị na-anabata dopamine ma na-ejikarị ya agwọ ọrịa. Maka ndị na-adịghị mkpa nke a, ọ nwere ike ịbụ akụkụ ntụpọ nke PRL-8-53 raw powder.
Nnyocha ọmụmụ mgbu na-egbuke egbuke gosiri oke ọnụ ụzọ na LD50 ọnụego, ma o doro anya na a chọkwuru ihe àmà. Ozokwa, o yiri ka emetụta PRL-8-53 ntụ ntụ bụ mbelata ọrụ n'ime ụbụrụ.
Usoro nhazi nke PRL-8-53
Usoro nke ime ihe maka nootropic a ka amaghi ugbua ma o nwere ike, na akuku, dina na usoro cholinergic. Dr. Hansl, onye kere ụlọ ahụ na-atụle na magazin Philadelphia Kappan na PRL-8-53 ntụ ntụ na-eme ka ụbụrụ nwee mmeghachi omume nke acetylcholine, ihe a abụghị ihe na-akpali akpali. Ihe nchọpụta maka PRL-8-53 raw ntụ ntụ kwuru banyere usoro cholinergic.
Nyocha anụmanụ nke gụnyere òké gosiri 4mg / KG mụbara ngwa ngwa apomorphine (dopamine agonist) mụbaa na-agba agba na oke, na-atụ aro na PRL-8-53 raw ntụ ntụ ruo n'ókè ụfọdụ bụ agonist dopamine. Nnyocha ahụ mekwara ka ọganihu dị mma na ịghara ịmụta ihe. Nke a nootropic anaghị eme ka àgwà amphetamine dị na oke ma ọ pụtaghị na-emechi ọrụ MAO. Otu nnyocha ụmụ mmadụ na-ekwu na mkpirikpi PRL-8-53 raw powder nwere ike ịmepụta dopamine ma mee ka mgbochi anya nke serotonin.
Uru nke Raw PRL-8-53 ntụ ntụ:
Nnyocha ahụ a na-ebipụta na-ebipụta maka PRL-8-53 ntụpụ na-egosi ntakịrị mmelite nke okwu nweta n'oge ọrụ ibido n'isi. E nyere ndị na-eso 5mg nke elekere 8 nke PRL-53-2 ka oge ntanye nke nyocha 12 na otu usoro ma gụọ ha na isi oge (n'oge na-adịghị anya mgbe a nwachara, otu ụbọchị na 4 ụbọchị mgbe). Achọpụtara obere uru maka nnweta ozugbo, ma a chọpụtara ihe karịrị 80% maka ndị a nwalere n'oge gara aga bụ ndị batara uchu maka ule (6 / 12 okwu n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ n'okpuru).
(2) Akwụsịbeghị (Ọ Pụrụ) Uru - Ụdị Omume Geometric
N'ụzọ na-akpali mmasị, onye mmepụta ihe ahụ na-ekwukwa banyere ule ndị ọzọ nke na-adịghị adị ma ọ bụ ndị a na-agbasabeghị. N'akwụkwọ akụkọ e bipụtara na 1978, Dr Hansl kwuru na ntụpọ PRL-8-53 na-eme ka ọnụ ọgụgụ dị elu dịkwuo na arụmọrụ nke akpụrụ akpụ. E gosipụtara ndị na-eso ụzọ usoro usoro geometric ma rịọ iji dọpụta ha site na ebe nchekwa, e mepụtara mmụgharị ndekọ ọnụ ọgụgụ.
(3) Egwuregwu Ọgụgụ Isi
N'otu isiokwu ahụ, Dr Hansl kwuru otu mmegharị ahụ nke nwere ike ịmepụta 7, gbakwunye 1, wepụ 7, gbakwunye 2 na ya ruo mgbe a ruru "nọmba" mgbaru ọsọ. Oge a na - atụ anya na nọmba "mgbaru ọsọ" dị na otu PRL-8-53 raw ntụ ntụ.
(4) Ule nyocha ugwo
Dr Hansl na-atụle otu ule ebe a jụrụ ajụjụ iji mee ka okwu si na ọtụtụ akwụkwọ ozi na ntụpọ. Dịka ọmụmaatụ "UR" ga-agbanye okwu ọ bụla site na itinye akwụkwọ ozi na mbido na njedebe nke okwu ahụ, ebe dochie ntụpọ ya na akwụkwọ ozi. "UR" nwere ike ịbụ "dị ugbu a" dịka ọmụmaatụ. Enwere mmeri dị ịrịba ama n'ime ndị nabatara ọgwụ ahụ.
PRL-8-53 ka ntụ ntụ
Ụdị PRL-8-53 dị ala Marketing
Otu esi azụta PRL-8-53 ntụ ntụ si AASraw